बी थेरापीबाट उपचार गराउनेको लर्को – Todaypokhara
बी थेरापीबाट उपचार गराउनेको लर्को
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं. १३ कि रुकुविना लामिछाने हरेक दिन बगर आउजाउ गरिरहन्छिन् । पोखरा लेखनाथ–१ बगरस्थित बी थेरापिस्ट पंकज श्रेष्ठले चलाएको बी थेरापी (मौरीले टोकाउने)का माध्यमबाट उपचार गराउन उनी दैनिक यहाँ आउँछिन् ।
परिवारका सदस्यको सहयोगमा थेरापी गराउन आउने ४६ वर्षिया रुकुविनालाई डाक्टरले नसासम्बन्धी समस्या भनेका छन् । हिड्न नसक्ने, मुख हल्का बाङ्गो हुने, बोली लरबरिने उनले पाँच वर्षदेखी उपचारको खोजीमा पोखरामा उपलब्ध नसा रोग विशेषज्ञ र काठमाडौंमा धेरैजसो नसा रोग विशेषज्ञलाई देखाएर उपचार गरिसकिन् । तैपनि उनलाई कुनै फरक आएन ।
उपचारको खोजीमा धाउँदा धाउँदै उनले लाखौं खर्च गरिसकिन्, ज्यान भने जस्ताको तस्तै । केही सिप नचलेपछि छिमेकीको सल्लाहमा उनी बी थेरापी गर्न बगर आइन् । ‘यहाँ आउन थालेको २२ दिन भो, दुखाई कम भएको छ । बोली पहिलेकोभन्दा बुझिन थालेको छ’ रुकुबिना भन्छिन्,‘अहिले बिस्तारै यताउता गर्न सक्ने भएकी छु । हातखुट्टा काम्ने ज्यान हल्लन धेरै कम भएको छ ।’
पोखरा माटेपानीका ५५ वर्षिय तीर्थराज श्रेष्ठ पनि बिहानको आठ नबज्दै पंकजको घरमा पुगिसक्छन् । उनी त्यहाँ पुग्दा उनीजस्तै थुप्रै बिरामी बी थेरापी गराउन लाइन कुरेर बसिरहेका हुन्छन् ।
उनको खुट्टाको औंला र घाँटी दुख्ने समस्या थियो । त्यही रोगको उपचार गराउन बी थेरापी गराइरहेका उनलाई अहिले धेरै सञ्चो भइसकेको छ । आफ्नो रोग सञ्चो भएपछि उनी अरुलाई पनि यहि उपचार गर्न सल्लाह दिन्छन् । ‘म सञ्चो भएपछि जाउ भन्छु, ढाड दुख्ने, घाँटी दुख्ने धेरैलाई मैले मेरै गाडीमा हालेर यहाँ ल्याइदिएको छु’ तीर्थराज भन्छन्,‘वर्षौदेखी विभिन्न रोगबाट पीडितले बी थेरापी गराएपछि सञ्चो भएका छन् ।’
पंकज श्रेष्ठले २०७२ जेठबाट सुरु गरेको निःशुल्क बी थेरापीमा अहिलेसम्म हजारौं बिरामीले उपचार गराइसकेका छन् । पंकजले थेरापी गरे बापत शुल्क लिँदैनन् । बिरामीले स्वेच्छिक रुपमा दान गरुन भनेर एउटा बाकस राखिदिएका छन् । बिरामीले जति मन लाग्यो त्यति रुपैंया दान बाकसमा राख्छन् ।
निःशुल्क उपचार दिइएकाले यहाँ उपचार गराउन आउनेहरुको दैनिक घुइँचो लाग्छ । पंकजले यसबारे कहिँकतै प्रचार गरेका छैनन्, बिरामी आफै एकले अर्कोलाई भन्दाभन्दै उपचार गराउन आउनेको यहाँ लर्को नै हुन्छ ।
बी थेरापिष्ट पंकज श्रेष्ठका अनुसार हरेक किसिमका रोगको उपचार बी थेरापीका माध्यमबाट संभव छ । उनका अनुसार मौरीको खिलमा विशेष प्रकारको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुन्छ । जसलाई भेनम भनिन्छ । उक्त भेनममा मिल्टन भन्ने पदार्थ पाइन्छ । उक्त मिल्टन एन्टिबाइटिकभन्दा सय गुणा बढी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुन्छ ।
‘प्यारालाइसिस, ढाड दुख्ने, गर्दन दुख्ने, खुट्टा दुख्नेदेखी हरेक प्रकारका रोगको उपचार गरेको छु’ पंकज भन्छन्,‘हाम्रा पूर्खाले परापूर्वकालदेखी गर्दै आएको बी थेरापी मैलै युज गरिरहेको छु ।’ पंकजले बी थेरापीको सीप दक्षिण कोरियाबाट सिकेका हुन् । उनले कोरियामै छँदा यो सीप सिकेर पोखरा भित्र्याएका हुन् ।
बी थेरापीबाट हाडजोर्नी सम्बन्धि रोग,बाथको रोग, अर्थराईटिस,ढाड र गर्दनका समस्या,माइग्रेन,सिरोसिस,उच्च तथा निम्न रक्तचाप,मधुमेह,अनिन्द्रा, घुडा दुखाई,मानसिक चिन्ता,थाइराइड, ग्यास्टिक जस्ता पेट्का समस्याहरु, मोटोपन, थकान र कमजोरी,मासिक धर्ममा गडबडी, असमयमा केश झर्ने ,संक्रमीत घाउ, नशा च्यापिएको, एलर्जी, छालाका समस्या आदि रोगहरुको उपचार हुने गरेको छ ।
रोग अनुसार कसैलाई केही दिन लगातार र कसैलाई केही दिन बिराएर उपचार गरिन्छ । बिरामीले पहिलो दिनको उपचारमा फरक अनुभव गर्न थाल्द्छ । बी थेरापीष्ट पंकजका अनुसार यहाँ उपचार गराउन आउनेमध्ये ८० प्रतिशत बिरामीले आफू निको भएको बताउने गरेका छन् ।
यही खबर सुनेर लेकसाइबाट ढाड दुख्ने रोगको उपचार गराउन आएकी ५२ वर्षिया चन्द्रि भुजेल बी थेरापीबाट सन्तुष्ट छिन् ।
‘ढाड दुखेर भ¥याङ उक्लन पनि सक्थेन, अहिले ठमठमी हिड्छु, मैले भगुवान भेटेको जस्तो भएको छ’ काठमाडौंको अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा ढाडको अअप्रेशन गर्ने भनेर तयार भइरहेका छिमेकीले बी थेरापीबारे सुनाएपछि उपचार सुरु गरेकी चन्द्रि भन्छिन्,‘आठ लाख रुपैंया सकिँदा पनि सञ्चो भएन । मौरिले टोकाएपछि हप्तादिनमै ढाड दुख्न छाड्यो । अहिले पनि बेलाबेला मौरिले टोकाउन आइरहन्छु ।’
एनले ढाडको उपचार गराउन पोखरा र काठमाडौंका धेरै अस्पताल चहारिसकेकी छिन् । डा. उपेन्द्र देवकोटालाई समेत पटक पटक देखाइन् । ‘ढाड दुख्दा दिनमा १० पटकसम्म धुरुधुरु रुन्थे । बुहारीले खाना बसेक्ै ठाउँमा लगिदिने । भ¥याङ चढ्न नसक्ने । पाइला सार्दा समेत गाह्रो हुन्थ्यो’ चन्द्रि भन्छिन्,‘पाँच वर्षदेखी दुःख पाएको यहाँ आएको हप्तादिनमै सञ्चो भयो ।’ चन्द्रिको ढाड दुख्न सञ्चो भएपछि अहिले उनकी बुहारी अनिता भुजेल पनि बी थेरापी गराउन आउँछिन् ।
बी थेरापिष्ट पंकजले बिरामीको चाप धेरै भएपछि हरेक दिन बिहान ८ बजेदेखी ११ बजेसम्म र १२ बजेदेखी दिउँसो २ बजेसम्म थेरापी गर्ने समय छुट्याएका छन् । तर, उनले छुट्याएको समयभन्दा धेरै बढी बिरामीको सेवा गर्छन् । बुधबार र शनिबार छुट्टी गर्छन्, साह्रै परेका बिरामीलाई भने यो दिनमा पनि उनी उपचार गरिदिन्छन् ।
उनका अनुसार एक दिनमा सरदरमा ६०–१०० जनासम्म बिरामीलाई बी थेरापी गर्ने गरिएको छ । सुरुसुरुमा बिरामीले मौरिले टोकाएर पनि उपचार हुन्छ भन्ठाने पनि आजभोली अत्यधिक चाप बढेको छ । त्यसकै साक्षी हुन् कास्की भलामकी बिष्णुमाया कार्की ।
५४ वर्षिय बिष्णुमाया बी थेरापी गराउन आउँदा बिरामीहरु ठिकठिकै हुन्थे । अहिले यहाँ आउने बिरामीको चाप देखेर उनी दंग पर्छिन् । प्यारालाइज भएर शरिरको दाइने भाग नचल्ने भएपछि विष्णुमायाले पोखरा र काठमाडौंका धेरै अस्पताल चहारिन् । लाखौं रुपैंयाँ खर्च गरिन् । छिमेकीको मुखबाट बी थेरापीबारे सुनेपछि उनले पाँच महिना अघि उपचार सुरु गरेकी हुन् ।
‘बी थेरापी सुरुगरेपछि अहिले मेरो दाइने भाग पनि चल्न थालेको छ । हात र खुट्टा दुख्न निकै कम भइसकेको छ’ विष्णुमाया भन्छिन्,‘लाखौं खर्च गर्दा पनि सञ्चो नभएको म निःशुल्क बी थेरापीले सञ्चो हुँदै गएकी छु ।’ निःशुल्क त्यो पनि विभिन्न रोगको उपचार गराउन पाउने भएपछि यहाँ बी थेरापी गराउनेको लर्को दैनिक बढ्दो छ ।